Izixazululo ze-Ultrasonic Zokwenza Kokukhiqizwa Vaccine Okuthuthukisiwe - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Sonication isetshenziselwa izinyathelo ezihlukahlukene zokulungiselela ukugoma: i-cell lysis, ukufanisa ukumiswa kwamangqamuzana, ukukhuthaza ukukhula kwamaseli, ukufakwa kwe-cell, ukufaka amaprotheni adjuvant njll njll.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-antigen, ukufakwa kwe-encapsulation kanye nokwakhiwa kanye nesinyathelo se-degassing ngaphambi kokugcwalisa umuthi wokugcoba ngezigxobo noma izilinganiso.
I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho owaziwa isikhathi eside ngezinhlelo ze-ultrasonic ezinokwethenjelwa embonini ye-pharma. Thola ukuthi yiziphi izinyathelo zokukhiqiza umgomo ongathuthukisa ukukhiqizwa kwakho!
I-ultrasonication ingaba nenzuzo ngezigaba ezihlukahlukene zokukhiqiza umuthi wokugoma. Ukukhiqiza umuthi wokugoma, isinyathelo sokuqala ukulungisa i-antigen ngokwayo. Kuncike emthonjeni we-pathogen, i-metod yesizukulwane se-antigen ihluke: Ngenkathi amagciwane akhule noma kumaseli ayisisekelo njengamaqanda enkukhu (isib. Umkhuhlane) noma emigqeni eqhubekayo yamaseli afana namaseli omuntu akhulayo (isb. For hepatitis A), amabhaktheriya ikhulile kuma-bioreactors (isib. haemophilus influenzae uhlobo b). Amaprotheni aphindaphindiwe, avela kumagciwane noma amabhaktheriya, angakhula futhi emvubelo, amabhaktheriya noma amasiko eseli. Lapho i-antigen ikhiqizwa, kufanele ikhishwe kuma-cell lapho ikhule khona.
I-virus ingadinga ukuthi ingasebenzi, mhlawumbe kungabi khona ukuhlanzwa okudingekayo. Ama-protein ayimfuneko adinga imisebenzi eminingi ehlanganisa i-ultrafiltration nekholm chromatography. Kuye ngokubunjwa kwegciwane, ama-adjuvant, ama-stabilizing agents, kanye nama-preservatives angeziwe. Ama-adjuvants enza ngcono ukuphendula komzimba kwamagciwane, ama-stabilizers kanye nama-preservatives ukwandisa impilo yeshalofu.
Ngesikhathi sokuhlinzeka nge-vaccination sonication ingasetshenziswa ngezigaba ezihlukahlukene. Njengoba indlela yokucubungula engeyona oshisayo, ukuchithwa kokushisa kwezinto eziyigugu kugwenywe. Thola ngaphansi kwezicelo ezivame kakhulu lapho i-ultrasound ithuthukisa ukukhiqizwa kwemigomo:
Ama-antigens afana ne-cell fragment noma ama-protein antigens kufanele ahlakazwe ngokuzenzakalelayo e-encapsulation yokumiswa, i-polymer, noma i-liposomal ukuze athole ukwakhiwa komuthi wokugoma. I-Sonication iqinisekisiwe isikhathi eside ukulungiselela ukusabalalisa okuhle ekukhiqizeni imikhiqizo yezokwelapha ngakho-ke kuyindlela eqinisiwe yokukhiqiza umuthi wokugoma.
Ama-adjuvants ase-aluminium asekelwe, anezinhlayiya ezincane kakhulu eziyinhloko, iyindlela ejwayelekile ejwayelekile yokusebenzisa i-adjuvant, engahlanganiswa kalula kwiyunithi esebenzayo ekwenzeni imithi yokugoma. Ukuze kuhlanganiswe izigulisi ezinama-antigens, ukusabalalisa okufanayo kwe-antigen kuyo yonke imithi yokugoma eline-aluminium iyadingeka. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kulungisa ama-dispersions ahambisanayo nama-antigens kanye neziphakamisi (isb. I-Alhydrogel ™).
I-Cell Lysis & Ukukhipha
Ama-antigens akhiqizwa ezincane ezincane kumele akhululwe esitokisini se-microbial. I-Sonication ubuchwepheshe bokufakazelwa kwe-cell lysis kanye ne-extraction. Ngokulungiswa kwemingcele ye-sonication, amangqamuzana angaphathwa noma aphazanyiswe ukuze ama-antigen ahlosiwe atholakale futhi angahlukaniswa.
I-ultrasound yamandla isetshenziselwa ukuphazamisa nokubulala ama-microorganisms afana namabhaktheriya namagciwane. Isibonelo, ukuchithwa kwe-ultrasonic ka-E. coli okulandelwa yi-irradiation kuye kwaboniswa ukuthi kuyindlela enamandla kunazo zonke yokulungiselela umgomo wokusebenza we-colibacillosis. [Melamed et al. 1991]
Amasu avamile asetshenziselwa ukuvimbela ama-microbial is pasteurization ezishisayo futhi inzalo, esekelwe ekuvezeni isikhathi eside emazingeni okushisa aphezulu futhi ngokuvamile kuholela ekudakaleni kwe-thermally induced properties. Ukwelashwa okuhlangene kwe-sonication nokushisa (i-thermo-sonication) kungasheshisa izinga lokuzala inzalo; njengoba amandla okushisa nobude buyancishiswa kakhulu, ukuwohloka okushisayo kwamakhemikhali azwela ukushisa (isib. amaprotheni, ama-antigens). Inzalo ye-Ultrasonic kanye ne-pasteurization yindleko ephumelelayo, enokonga amandla kanye nemvelo-friendly.
Emulsions & ukumiswa
Ukufakelwa kwegciwane kungabandakanya izingxube zamanzi-lipid. Njengoba ama-lipid formulations are immiscible, i-emulsion emihle kufanele ilungiswe ngokunqoba ama-droplets’ ukuphazamiseka kwendawo noma ukusebenzisa i-surfactant. I-ultrasonic emulsification iyindlela eqinisiwe yokwakha I-Nano-Emulsions / emulsions mini, imulsions kabili, futhi Ukukhishwa kwe-Pickering Emulsions. Ngokwesibonelo, i-lipopeptides engenawo amanzi ingeniswa nge-ultrasonically nge-antigen ngo-1: 1 (w / w) isilinganiso kwisisombululo se-aqueous.
Ngaphezu kwalokho, i-sonication isetshenziselwa ukunciphisa ama-cell aggregats nokusabalalisa iseli elilodwa elihlakazekile ngokumiswa.
I-Ultrasonic ingilazi yeglasi
Imithi ngokuvamile iqukethe eyodwa noma ngaphezulu izishukela, esetshenziselwa ukuthuthukisa ukuphendula komzimba. Nge-ultrasonication, ama-microfibres adjuvant aphikisiwe futhi ahlakazwe ngokufanayo ukuze amaprotheni abophezele phezulu. Ama-adjuvant ase-emulsion-based based systems asetshenziselwa kakhulu ukuthuthukiswa komuthi kanye nokwakhiwa. Ama-adjuvant asekelwe emulsion-based asetshenziselwa ukusebenzisa izinhlobo ezahlukene ze-emulsion njengamafutha-ngaphakathi kwamanzi (o / w), amanzi-in-amafutha (w / o), amanzi angenawoyela-ngamanzi (w / o / w), noma ama-emulsions ayenziwe amaprotheni.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa zengezwa ukuvimbela ukungcoliswa komuthi ngamagciwane noma isikhunta. Ama-preservatives angasetshenziswa ngezigaba ezahlukene zokukhiqizwa kwemigomo.
Ukusetshenziswa kwama-homogenizers e-ultrasonic kukhuthaza ukuxuba nokuhle kakhulu nokuhlakazeka futhi ngaleyo ndlela ithuluzi elithembekile lokukhiqiza umuthi wokugoma.
Ukubunjwa & I-Liposomal encapsulation
Imishanguzo ye-liposome-encapsulated ingasetshenziswa ngomlomo, nge-intranasally, intramuscularly, ngaphansi kwe-subcutanously futhi iyindlela enhle yokuhambisa imithi yokugoma kanye ne-adjuvant, engayithuthukisa ukulethwa okuhlosiwe nokunciphisa ubuthi be-antigens obanjwe. I-Sonication iyindlela yokwethenjelwa yokufaka ama-compounds asebenzayo abe yi-liposomal formulations. Funda kabanzi mayelana nokubunjwa kwe-ultrasonic yama-liposomes!
Dor isibonelo, ukuze enze umuthi wokugonywa kwezilwane ngokumelene nesifo seNewcastle, uZhao et al. (2011) walungisa i-phosphatidylcholine / i-cholesterol encane ye-unilammelar vesicles (i-SUV) ngaphansi kwe-sonication. Umuthi wokugoma owenziwe nge-ultrasonically wabonisa ukuphendula kwamagciwane omzimba, i-IgG ephezulu kanye ne-IgM iziqu ze-antibody kanye ne-T-cell ne-B-cell ukukhushulwa.
Ngesikhathi sokugoma nokukhiqizwa kwemithi futhi ngaphambi kokupakisha, imishanguzo kanye noketshezi ezifana nokumiswa, izixazululo, imulsions kanye nokufometha kokugcina kumele kuhlaziywe. Ngesikhathi ama-bubbles gas gases (de-oxygen, carbon dioxide, abanjwe emanzini), asuswe. Amagagasi e-ultrasonic akhuthaza ukuqhuma kwamagesi okugcoba okuneziphuzo. ukukhishwa kwamagesi we-gas kungenziwa ngcono lapho kusetshenzwa isikhunta esincane kumkhumbi we-sonication. I-Ultrasonically yasiza i-degassing kuyindlela elula yokumiswa yokumiswa okunamandla.
Ukuqhuma kwe-ultrasonic ngesikhathi sokungena (inqubo yokungenisa izinyunyana zibe yikhiqiza yamasiko) kungandisa ukwanda kwamasiko eseli. Ukuqina kwe-sonication, isikhathi sokushisa kanye nokugcina ama-bioreactors ase-Hielscher ultrasonic angaphathwa kahle ngokuphathelene nohlobo lweseli kanye nezidingo zalo.
Isibonelo, indodanaication emnene ingasetshenziswa ekwandiseni ukutholakala kweglucose yamaseli futhi kukhuthaze ngaleyo ndlela ukukhula kwamasiko esitokisi kanye nokumiswa. I-Ultrasound iyaziwa ukwandisa ukutholakala kwamangqamuzana, okwakuthiwa nawo angathuthukisa ukushintshaniswa kwemvelo / ukudoba ngaleyo ndlela eholele ekukhiqizeni umgomo wokugoma. Ngalokhu, isikhathi sokukhiqiza umgomo singanciphisa futhi / noma isivuno samaprotheni asetshenziswa njengemigomo inganyuswa.
Hielscher Ultrasonics’ Ama-Pharact-Reactors
I-Hielscher Ultrasonics ikhethekile ekukhiqizeni izinhlelo eziphezulu zamandla ultrasonic kanye ne-sono-bioreactors ukuze kuqaliswe ukusebenza ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwezimboni zamakhemikhali (isib imithi, Ama-API)
I-Sonication ingasetshenziselwa ukuvula izitsha, izakhi ezivaliwe kanye nezigameko eziqhubekayo zokugeleza. Zonke izingxenye zezinhlelo ze-ultrasonic, ezithintana ne-medium medium, zenziwa ngensimbi engagqwali, titanium, noma ingilazi. Izingxenye ezingagciniwe nezingeniso zangasese ziqinisekisa ukukhiqizwa i-pharma-grade imikhiqizo.
Isofthiwe ehlakaniphile ibhala imingcele yenqubo ye-sonication ngokuzenzakalelayo kumemori khadi edidiyelwe ye-SD. Ukulawulwa okuqondile kwazo zonke izinqubo zokuqinisekisa ukuqinisekisa Reproducibility futhi ukusimamisa ukukhiqizwa.
Hielscher Ultrasonics’ zezimboni processor ultrasonics zinokwethenjelwa kakhulu futhi zingalawulwa ngokuqondile. Zonke ultrasonicators zezimboni zingalungiswa ukuze zilethe uhla olugcwele kusukela kuma-amplitudes aphansi kuya phezulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komsebenzi osindayo nasezindaweni ezinzima.
Dereje Damte, Seung-Jin Lee, Biruk Tesfaye Birhanu, Joo-Won Suh, noSeung-Chun Park (2015): Ama-Protein Amaprotheni Ama-Mycoplasma hyopneumoniae I-Induce Izimpendulo Zokuvuvukala nokuchazwa KweGene Okuhlukile Emgqeni Wase-Macrophage Wase-Murine Alveolar Cell Line. J. Microbiol. I-Biotechnol. (2015), 25 (12), 2153-2159.
UChristopher B. Fox, uRyan M. Kramer, uLucien Barnes V, uQuinton M. Dowling, uThomas S. Vedvick (2013): Ukusebenzisana ndawonye: ukusebenzisana phakathi kwama-antigens okugoma nokugoma. Ukuthuthukiswa Kwezokwelapha Emitholampilo. 2013 Meyi; 1 (1): 7-20.
J. Robin Harris, u-Andrei Soliakova, uRichard J. Lewis, uFrank Depoix, u-Allan Watkinson, uJeremy H. Lakeya (2012): i-Alhydrogel® adjuvant, ukuhlakazeka kwe-ultrasonic kanye namaprotheni okubophezelayo: ukuhlolwa kwe-TEM nokuhlaziya. Micron Volume 43, Issues 2-3, Febhuwari 2012, 192-200.
UDoron Melamed, uGabriel Leitner, E. Dan Heller (1991): Umuthi wokulwa ne-Avian Colibacillosis Ngokusekelwe ku-Ultrasonic Inactivation ka-Escherichia coli. Izifo Zamaqhawe Vol. 35, No. 1 (Jan. – Mar., 1991), 17-22.
Zhao X., Fan Y., Wang D., Hu Y., Guo L., Ruan S., et al. (2011): Ukuphumelela kwe-immunological adjuvant ye-glycyrrhetinic acid liposome ngokumelene nomuthi wokugoma we-Newcastle. Umgomo 29: 9611-9617
Ukusebenza Isimiso Samandla I-Ultrasound: I-Acoustic Cavitation